ခန်ဓာကိုယျစှနျ့လှူ အပျနှငျးရကြိုးမြား - ApannPyay Media
ဘုရားနှငျ့ဆရာအား ခန်ဓာကိုယျစှနျ့လှူ အပျနှငျးရကြိုးမြား
ဘုရားအားလှူခွငျး။ ။”ဣမာဟံ ဘဂဝါ အတ်တဘာဝံ တုမှာကံပရိစ်စဇာမိ= မွတျစှာဘုရား၊ ဘုရားတပညျ့တျော သညျ ဤခန်ဓာကိုယျ အတ်တဘောကွီးကို မွတျစှာဘုရား အား အပျနှငျးစှနျ့လှူပါသညျဘုရား ”
“သံသာရ ဝဋ်ဋဒုက်ခတော မောစနတ်ထာယ ကမ်မဋ်ဌာနံ မေ ဒထေ = ဘုရားတပညျ့တျောအား သံသရာ ဝဋျဆငျးရဲမှ ထှကျမွောကျ ကြှတျလှတျ ပါရခွငျး အကြိုးငှာ ကမ်မဋ်ဌာနျး တရား ပေးသနား၍ ခြီးမွှငျ့ တျောမူပါဘုရား ”
ဆရာအားလှူခွငျး။ ။”ဣမာဟံ ဘန်ေတအတ်တဘာဝံ တုမှာကံ ပရိစ်စဇာမိ = (‘မွတျစှာဘုရား ‘နရော၌ ‘အရှငျဘုရား ‘ဆိုရုံသာ ထူးပသေညျ။)
“သံသာရ ဝဋျဒုက်ခတော မောစနတ်ထာယ ကမ်မဋ်ဌာနံ မေ ဒထေ” (ရှကေ့အတိုငျးသာ—)
ယငျးသို့ စှနျ့လှူ အပျနှငျးသညျ့ အတှကျ အဘယျအကြိုး ရှိပါသနညျး? အကြိုးမြားစှာရှိပေ၏။ ဤသို့ ပွုလုပျခွငျးသညျ ဆရာသမားအား ရိုသကြေိုးနှံ့ကွောငျး ဖျောပွခွငျးပငျ ဖွဈပါ၏။
ထိုမှ တဈပါးလညျး မိမိ၏ ဆန်ဒ၊ သဒ်ဓါ၊ ဝီရိယကို ထုတျဖျော ပွရာလညျး ရောကျသညျ။ထိုသို့ နှုတျမွှကျ စှနျ့လှူ ကတညျးက မိမိ၏ ရုပျနာမျ အစဉျ၌ ကွညျလငျ ပွတျသားသော ယုံကွညျမှု အငျအား(သဒ်ဓါဓာတျ)၊ မရမနေ လိုလားသော စိတျဓာတျ အငျအား (ဆန်ဒဓာတျ)၊ မဖွဈမနေ ကွိုးစားနိုငျသော အငျးအား (အာရ မ်ဘ = နိက်ကမ = ပရက်ကမဓာတျ ချေါ ဝီရိယဓာတျ) မြား တရိပျရိပျ ဝငျလာသညျကို တှရေ့မညျဖွဈ၏။
ထို သဒ်ဓါ၊ ဆန်ဒ၊ ဝီရိယဓာတျတို့သညျ ပရမတ်ထသဘာဝ အမှနျတကယျ ရှိသော အငျအားမြား၊ သတ်တိထူးကွီးမြား ဖွဈကုနျ၏။ ကမ်မဋ်ဌာနျးတရား အားထုတျမညျ့ သူ၌ ထိုအငျအား သုံးခု မရှိ၍ မဖွဈခြေ။
မိမိ တဈကိုယျတညျး တရားထိုငျ နသေညျဟု ထငျရ သျောလညျး မဟုတျခြေ။ သုံးလောက ထှတျထား ဘုရားရှငျ နှငျ့တကှ မိမိ ကမ်မဋ်ဌာနျးဆရာ တို့၏ ဘုနျးတနျခိုး မတ်ေတာ ကရုဏာ အရှိနျအဝါမြား သကျဝငျကာ စငျစဈ ဘုရားရှငျနှငျ့ ဆရာသမားမြား သညျ သငျယောဂီနှငျ့ အတူရှိတျော မူနကွေ၏။***
စိတ်တဗဒေ အရလညျး ရှေးအခါက စဈသူကွီး ဦးစီး တိုကျသော စဈပှဲနှငျ့ တိုငျးပွညျသခငျ ရှငျဘုရငျ ကိုယျတိုငျ ဦးစီး တိုကျသော စဈပှဲမြား အောငျပှဲခံ ရပုံခငျြး မတူကွခြေ။ စဈသညျမြား ပို၍ စိတျအား ထကျသနျ တကျကွှခွငျး၊ ဘုရငျ့အရှိနျအဝါ ကွီးမားခွငျး တို့ကွောငျ့ပငျ ဖွဈပသေညျ။
တရားထိုငျခွငျး ဟူသညျ မာရျစဈသညျမြားနှငျ့ တိုကျပှဲဝငျ နရေခွငျး ပငျတညျး။
ဤကဲ့သို့ စှနျ့လှူ အပျနှငျး၍ မထားပါဘဲ တောစှနျ စုံပွား နရောမြားသို့ သှားရောကျ၍ တရားရှုပှားသညျ ရှိသျော တစုံတဈခုသော ကွောကျရှံ့ ထိတျလနျ့ဖှယျ အနှောငျ့အယှကျ အန်တရာယျ အာရုံနိမိတျမြား တှကွေုံ့ ထငျမွငျလာလြှငျ ယောဂီသညျ ကွံ့ကွံ့ခိုငျခိုငျ မခံရပျ နိုငျတော့၍ ရှာနီး ခြုပျစပျသို့ ကပျရောကျ လာရကာ လူတို့နှငျ့ ရော၍ မလိုလား အပျသော အကြိုးမဲ့ ပကျြစီးခွငျး ပကျြစီးသှား နိုငျလသေညျ။
ဘုရားရှငျအား ခန်ဓာကိုယျ စှနျ့လှူ အပျနှငျး ထားသော ယောဂီမှာကား အကယျ၍ တစုံတရာ ကွောကျရှံ့ ထိတျလနျ့ဖှယျ အနှောငျ့အယှကျ အန်တရာယျ အာရုံနိမိတျမြား တှကွေုံ့ရ သျောလညျး ကွောကျရှံ့ ထိတျလနျ့ခွငျး မဖွဈတော့ပွီ။ မဖွဈရုံသာမက–
“အသိဉာဏျ ရှိသော အိုယောဂီ…။ သငျသညျ သငျ၏ ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ အသကျကို ဘုရားရှငျအား ရှေးမဆှ ကပငျ နှငျးအပျ စှနျ့လှူခဲ့ပွီ မဟုတျပါလား” ဟု ဆငျခွငျ လိုကျသညျနှငျ့ တပွိုငျနကျ၊ “တှငျးပွငျ နှဈဖွာ လှနျစှာ အန်တရာယျ မြားလှသောငါ၏ ခန်ဓာကိုယျကွီးကို သငျ့
ဘုရားနှင့်ဆရာအား ခန္ဓာကိုယ်စွန့်လှူ အပ်နှင်းရကျိုးများ
ဘုရားအားလှူခြင်း။ ။”ဣမာဟံ ဘဂဝါ အတ္တဘာဝံ တုမှာကံပရိစ္စဇာမိ= မြတ်စွာဘုရား၊ ဘုရားတပည့်တော် သည် ဤခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောကြီးကို မြတ်စွာဘုရား အား အပ်နှင်းစွန့်လှူပါသည်ဘုရား ”
“သံသာရ ဝဋ္ဋဒုက္ခတော မောစနတ္ထာယ ကမ္မဋ္ဌာနံ မေ ဒေထ = ဘုရားတပည့်တော်အား သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက် ကျွတ်လွတ် ပါရခြင်း အကျိုးငှာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရား ပေးသနား၍ ချီးမြှင့် တော်မူပါဘုရား ”
ဆရာအားလှူခြင်း။ ။”ဣမာဟံ ဘန္တေအတ္တဘာဝံ တုမှာကံ ပရိစ္စဇာမိ = (‘မြတ်စွာဘုရား ‘နေရာ၌ ‘အရှင်ဘုရား ‘ဆိုရုံသာ ထူးပေသည်။)
“သံသာရ ဝဋ်ဒုက္ခတော မောစနတ္ထာယ ကမ္မဋ္ဌာနံ မေ ဒေထ” (ရှေ့ကအတိုင်းသာ—)
ယင်းသို့ စွန့်လှူ အပ်နှင်းသည့် အတွက် အဘယ်အကျိုး ရှိပါသနည်း? အကျိုးများစွာရှိပေ၏။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဆရာသမားအား ရိုသေကျိုးနွံ့ကြောင်း ဖော်ပြခြင်းပင် ဖြစ်ပါ၏။
ရိုသေကျိုးနွံ့ မြေဝယ်မကျ နာယူသူတို့ မှာလည်း မြှောက်စား အားပေးခြင်း ခံယူ ရသည်။ ဆရာသမား မြှောက်စား အားပေးခြင်း ခံရသူ မှသာလျှင်လည်း လိုရာပန်းတိုင် သို့ ရောက်ရ၏။ ချမ်းသာရ၏။
ထိုမှ တစ်ပါးလည်း မိမိ၏ ဆန္ဒ၊ သဒ္ဓါ၊ ဝီရိယကို ထုတ်ဖော် ပြရာလည်း ရောက်သည်။ထိုသို့ နှုတ်မြွက် စွန့်လှူ ကတည်းက မိမိ၏ ရုပ်နာမ် အစဉ်၌ ကြည်လင် ပြတ်သားသော ယုံကြည်မှု အင်အား(သဒ္ဓါဓာတ်)၊ မရမနေ လိုလားသော စိတ်ဓာတ် အင်အား (ဆန္ဒဓာတ်)၊ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားနိုင်သော အင်းအား (အာရ မ္ဘ = နိက္ကမ = ပရက္ကမဓာတ် ခေါ် ဝီရိယဓာတ်) များ တရိပ်ရိပ် ဝင်လာသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်၏။
ထို သဒ္ဓါ၊ ဆန္ဒ၊ ဝီရိယဓာတ်တို့သည် ပရမတ္ထသဘာဝ အမှန်တကယ် ရှိသော အင်အားများ၊ သတ္တိထူးကြီးများ ဖြစ်ကုန်၏။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား အားထုတ်မည့် သူ၌ ထိုအင်အား သုံးခု မရှိ၍ မဖြစ်ချေ။
မိမိ တစ်ကိုယ်တည်း တရားထိုင် နေသည်ဟု ထင်ရ သော်လည်း မဟုတ်ချေ။ သုံးလောက ထွတ်ထား ဘုရားရှင် နှင့်တကွ မိမိ ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာ တို့၏ ဘုန်းတန်ခိုး မေတ္တာ ကရုဏာ အရှိန်အဝါများ သက်ဝင်ကာ စင်စစ် ဘုရားရှင်နှင့် ဆရာသမားများ သည် သင်ယောဂီနှင့် အတူရှိတော် မူနေကြ၏။***
စိတ္တဗေဒ အရလည်း ရှေးအခါက စစ်သူကြီး ဦးစီး တိုက်သော စစ်ပွဲနှင့် တိုင်းပြည်သခင် ရှင်ဘုရင် ကိုယ်တိုင် ဦးစီး တိုက်သော စစ်ပွဲများ အောင်ပွဲခံ ရပုံချင်း မတူကြချေ။ စစ်သည်များ ပို၍ စိတ်အား ထက်သန် တက်ကြွခြင်း၊ ဘုရင့်အရှိန်အဝါ ကြီးမားခြင်း တို့ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
တရားထိုင်ခြင်း ဟူသည် မာရ်စစ်သည်များနှင့် တိုက်ပွဲဝင် နေရခြင်း ပင်တည်း။
ဤကဲ့သို့ စွန့်လှူ အပ်နှင်း၍ မထားပါဘဲ တောစွန် စုံပြား နေရာများသို့ သွားရောက်၍ တရားရှုပွားသည် ရှိသော် တစုံတစ်ခုသော ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် အနှောင့်အယှက် အန္တရာယ် အာရုံနိမိတ်များ တွေ့ကြုံ ထင်မြင်လာလျှင် ယောဂီသည် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင် မခံရပ် နိုင်တော့၍ ရွာနီး ချုပ်စပ်သို့ ကပ်ရောက် လာရကာ လူတို့နှင့် ရော၍ မလိုလား အပ်သော အကျိုးမဲ့ ပျက်စီးခြင်း ပျက်စီးသွား နိုင်လေသည်။
ဘုရားရှင်အား ခန္ဓာကိုယ် စွန့်လှူ အပ်နှင်း ထားသော ယောဂီမှာကား အကယ်၍ တစုံတရာ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် အနှောင့်အယှက် အန္တရာယ် အာရုံနိမိတ်များ တွေ့ကြုံရ သော်လည်း ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ခြင်း မဖြစ်တော့ပြီ။ မဖြစ်ရုံသာမက–
“အသိဉာဏ် ရှိသော အိုယောဂီ…။ သင်သည် သင်၏ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အသက်ကို ဘုရားရှင်အား ရှေးမဆွ ကပင် နှင်းအပ် စွန့်လှူခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလား” ဟု ဆင်ခြင် လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ “တွင်းပြင် နှစ်ဖြာ လွန်စွာ အန္တရာယ် များလှသောငါ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို သင့်
လုံခြုံရာ၌ သိမ်းဆည်းအပ်နှံ ထားခဲ့ရပေပြီ” ဟု ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ၍ပင် နေတော့သည်။